Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas na -ewepụta mmemme mmemme ezumike nke Junkanoo nke abụọ nke 2
Bahamas Ministry of Tourism and Aviation na -akwado maka ịnabata ememme oge okpomọkụ nke abụọ nke Junkanoo (JSF) maka Satọde atọ na -esochi, Ọgọst 2, 3 na 14, 21.
Ememme ezumike Junkanoo bụ otu n'ime mmemme izizi nke Bahamas Ministry of Tourism na -eme kwa afọ.
Ememme a malitere n'afọ 2015 wee too nke ọma wee nweta nnukwu ewu ewu.
N'ihi ewu ewu ya, Ministry of Tourism na -eme emume a nke na -ekwe nkwa na ọ ga -atọkwa ụtọ.
Ememe a na -eme ememme ga -adị na ikuku Ibe Facebook TourismTodayBahamas ga -egosipụtakwa ihe niile Bahamian, omenala, ọdịnala, nri ụtọ Bahamia, na nka na akụkọ Junkanoo. Ihe omume mebere a na -enye ohere ka Ministri njem na -aga n'ihu na -agba mbọ idobe onye ọ bụla nchekwa, na -echekwa ihe nketa ọdịbendị ya.
Ememme ezumike Junkanoo bụ otu n'ime mmemme izizi nke Mịnịsta na -ahụ maka njem na -eme kwa afọ. Kemgbe mmalite ya na 2015, ememme a etoola nke ukwuu wee nweta nnukwu ewu ewu. N'ọnọdụ ahụ, Ministri na -ahụ maka njem na njem ụgbọelu na -akpọ mmadụ niile oku ka ha sonye n'ememe a ka ọ na -egosipụta ihe bụ eziokwu Bahamian.
Soro na paradaịs a na-ahụ anya nke talent Bahamian, nke gụnyere ndị ọzọ, Ira Storr na Spank Band, Geno D., Lady E, na Bishọp Veronica. Ihe mmemme a ga -abụkwa onye ọbịa ya Bahamian ndị na-abụ abụ na ndị na-ede abụ Dyson na Wendy Knight ga-ejedebe na egwu Junkanoo dị ndụ site n'òtù junkanoo nke kpakpando niile.
Ememe a na-atụ anya nke ukwuu, ọ bụ ezie na ọ bụ nke mebere eme, na-ekwe nkwa na ọ ga-atọ ụtọ ma na-etinye aka na ya ga-egosipụta akụkụ dị mkpa nke omenala Bahamian, dị ka imepụta ihe nke ndị ya, egwu na ịgba egwu, akụkọ, nri Bahamia, na ụdị ihe ọ drinksụ drinksụ mpaghara.